” ရုံတင်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး “ -
ကိုရီယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ရိုက်ကူးပြီး မကြာခင်မှာပဲ ရုံတင်ခွင့်ရရှိသွားတဲ့ အကြောင်းကို “Please Share ! “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ဆင်ဆာခွင့်ပြုချက်ရရှိ ပြီးဖြစ်ပါသည် (၁၉.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိ JCGV ရုပ်ရှင်ရုံများ Paradiso ရုပ်ရှင်ရုံများ Red Radiance ရုပ်ရှင်ရုံ Mega Ace ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ” လို့ Big5Film Production ရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“တိမ်တွေပေါ်ကပန်း ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ New York Film Academy (Los Angeles) မှ ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေ နဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇင်ယော်မောင်မောင်ရဲ့ ခေါင်ဆောင်မှုအောက်ကနေ သားဖြစ်သူမင်းသန့်မောင်မောင်ရဲ့ New York Film Academy မှတတ်မြောက်လာတဲ့ အနုကပညာတွေနဲ့ ဘယ်လိုဖန်တီးပုံဖော်ထားလဲဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စရာဖြစ်သလို့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ မင်းသန့်မောင်မောင်၊မေသန်းနု၊ဇင်ယော်မောင်မောင်တို့ မိသားစုရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဆုံစည်းပုံဖော်ထားတဲ့ အနုပညာတစ်ခုဆိုလဲမမှားပါဘူး။
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ကိုရီးယားမင်းသားချောလေး Ryu Sang-Wook၊ ပရိသတ်အချစ်တော်ကျော်ထက်အောင်တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့၊ဘူဆန်မြို့တို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ချင်းတောင်တန်းရဲ့ အလှအပတွေကို နောက်ခံထားရိုက်ကူးထားတဲ့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုရီယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုရုံတင်ပြသသွားမှာတဲ့နော်။
Source: Big5Film Production,CRD-Cele Gabar
” ရုံတငျခှငျ့ရရှိသှားပွီဖွဈတဲ့ ကိုရီးယား-မွနျမာခဈြကွညျရေး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး “
ကိုရီယား-မွနျမာခဈြကွညျရေး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးဖွဈတဲ့ “တိမျတှပေျေါကပနျး ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကတော့ ရိုကျကူးပွီး မကွာခငျမှာပဲ ရုံတငျခှငျ့ရရှိသှားတဲ့ အကွောငျးကို “Please Share ! “တိမျတှပေျေါကပနျး” ဆငျဆာခှငျ့ပွုခကျြရရှိ ပွီးဖွဈပါသညျ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉) ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံတဝှမျးလုံးရှိ JCGV ရုပျရှငျရုံမြား Paradiso ရုပျရှငျရုံမြား Red Radiance ရုပျရှငျရုံ Mega Ace ရုပျရှငျရုံမြားတှငျ ပွသသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါသညျ ” လို့ Big5Film Production ရဲ့ တရားဝငျ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
“တိမျတှပေျေါကပနျး ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကိုတော့ New York Film Academy (Los Angeles) မှ ပညာသငျယူခဲ့တဲ့ ခတျေလူငယျတဈယောကျရဲ့ရငျခုနျသံတှေ နဲ့ ပုံဖျောရိုကျကူးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။နိုငျငံကြျောဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈတဲ့ ဇငျယျောမောငျမောငျရဲ့ ခေါငျဆောငျမှုအောကျကနေ သားဖွဈသူမငျးသနျ့မောငျမောငျရဲ့ New York Film Academy မှတတျမွောကျလာတဲ့ အနုကပညာတှနေဲ့ ဘယျလိုဖနျတီးပုံဖျောထားလဲဆိုတာကတော့ ရငျခုနျစရာဖွဈသလို့ ဒီရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကတော့ မငျးသနျ့မောငျမောငျ၊မသေနျးနု၊ဇငျယျောမောငျမောငျတို့ မိသားစုရဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျပွနျလညျဆုံစညျးပုံဖျောထားတဲ့ အနုပညာတဈခုဆိုလဲမမှားပါဘူး။
ဒီရုပျရှငျဇာတျကားကွီးထဲမှာတော့ နိုငျငံကြျောမငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုံရှရေညျ၊ကိုရီးယားမငျးသားခြောလေး Ryu Sang-Wook၊ ပရိသတျအခဈြတျောကြျောထကျအောငျတို့ကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံ ဆိုးလျမွို့၊ဘူဆနျမွို့တို့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံရှိ ခငျြးတောငျတနျးရဲ့ အလှအပတှကေို နောကျခံထားရိုကျကူးထားတဲ့ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးရုပျရှငျဇာတျကားကွီးပဲဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးရေ ကိုရီယား-မွနျမာခဈြကွညျရေး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးဖွဈတဲ့ “တိမျတှပေျေါကပနျး ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကတော့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)မှာ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးကိုရုံတငျပွသသှားမှာတဲ့နျော။